Izindaba - Ukugcinwa nokugcinwa kwesikhunta sepayipi
Uma kuqhathaniswa nezinye isikhunta, ipayipi mouldhas kufaneleka isakhiwo eqonde ngokwengeziwe futhi eziyinkimbinkimbi, futhi sinezidingo ephakeme ukunakekelwa kanye nokugcinwa kwayo. Ngakho-ke, kunqubo yokukhiqizwa kwesikhunta sepayipi, ukugcinwa okulungile nokugcinwa kwayo kulungele ukuthuthukisa ukusebenza kahle kokukhiqiza nokugcina ukukhiqizwa okuzinzile kwemikhiqizo.
Namuhla, ngizokwabelana nawe ngolwazi oluthile lochwepheshe bethu ekugcineni isikhunta.
1. Ngemuva kokuthi isikhunta sifakwe emshinini wokubumba umjovo, sebenzisa isikhunta esingenalutho kuqala. Bheka ukuthi ukunyakaza kwengxenye ngayinye kuguquguquka yini, noma ngabe kukhona into engavamile, noma ngabe ukukhishwa kwe-ejection nokuvulwa kwesifo kukhona, noma ngabe indawo yokuvaleka ifaniswe ngokuqinile ngesikhathi sokubamba isikhunta, nokuthi isikulufu sepuleti yengcindezi siqinisiwe yini.
2. Lapho isikhunta sisetshenziswa, gcina izinga lokushisa elijwayelekile futhi usebenze ezingeni lokushisa elijwayelekile ukunweba impilo yesevisi yesikhunta.
3. Izingxenye ezijwayelekile zomshini wesikhunta kufanele zihlolwe njalo, futhi uwoyela wokugcoba kufanele usetshenziswe lapho kufanele khona, njengethimble, indawo yomugqa, okuthunyelwe kokuqondisa, umkhono womkhombandlela. Ikakhulukazi lapho izinga lokushisa liphezulu ehlobo, uwoyela kufanele ungezwe okungenani kabili ukugcina lezi zingxenye zisebenza ngokuguquguqukayo.
4. Ngemuva kokuba isikhunta sisetshenzisiwe, kufanele kuhlanzwe umgogodla nomgogodla, futhi kungasali doti, ukuze kungalimazi ubuso besikhunta bese kufuthwa i-anti-rust agent.
5. Akufanele kube khona amanzi asalayo okupholisa ohlelweni lokupholisa isikhunta, futhi kufanele ahlanzwe ukuvikela isikhunta ekugqokeni nasekuvimbeni umsele wamanzi, ukwelula impilo yomzila wamanzi opholile.
6. Hlanza ubuso bembobo njalo. Lapho uhlikihla, sebenzisa amalungiselelo otshwala noma e-ketone bese ushaye womile ngesikhathi ukuvimbela izinhlanganisela eziphansi zamangqamuzana ezikhiqizwa ngesikhathi senqubo yokubumba umjovo ekugqiliseni umgodi wesikhunta.
7. Lapho isikhunta sisebenza, hlola ngokucophelela isimo sokusebenza sengxenye ngayinye yokulawula ukuvimbela ukungajwayelekile nokushisa kohlelo olusizayo.
8. Ngemuva kokuthi isikhunta sisebenze, faka i-rust inhibitor emgodini wesikhunta ukugwema ukugqwala. Penda ingaphandle lesisekelo sesikhunta ukugwema ukugqwala.
9. Isikhunta kufanele sivalwe siqine lapho kugcinwa khona ukuvimbela uthuli ukuthi lungene emgodini futhi lubangele ukugqwala.
Ekugcineni, izinyathelo zokuvikela isikhunta:
1. Izingxenye zesikhunta kufanele zifakwe uwoyela ngesikhathi sokugcinwa kwansuku zonke
2. Ubuso besikhunta kufanele buhlale buhlanzekile, unganamatheli amalebula ebusweni besikhunta
3. Uma kutholakala okungajwayelekile kusikhunta ngesikhathi senqubo yokukhiqiza, njengokukhishwa okungavamile noma ukuvuleka okukhulu nemisindo yokuvala, misa umshini ngokushesha ukuze uhlolwe futhi ulungiswe ngesikhathi. Ungenzi eminye imisebenzi.